Degso HealthPass APK loogu talagalay Android
Bilaash Degso loogu talagalay Android (12.00 MB)
Codsiga moobilka ee HealthPass waa arjiga baasaboorka caafimaadka oo ay Wasaaradda Caafimaadka u diyaarisay muwaadiniinta Jamhuuriyadda Turkiga. Adigoo adeegsanaya dalabka taleefanka gacanta ee HealthPass, oo aad si bilaash ah uga soo dejisan karto taleefankaaga Android, waxaad ku ilaalin kartaa tallaalkaaga Covid-19, baaritaanka coronavirus iyo shahaadooyinka xasaanadda ee heerarka caalamiga ah si fududna u wadaagi kartaa intaad safarka ku jirto.
Soo degso HealthPass Mobile App
Waa maxay HealthPass? Si si wax ku ool ah loola dagaallamo nooca cusub ee cudurka faafa ee coronavirus (Covid-19), kaas oo Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), uu ku tilmaamay inuu yahay masiibo (cudurka faafa ee adduunka), dalkeenna iyo adduunka oo dhan, si looga hortago faafitaanka fayraska iyo si loo yareeyo saamaynta faafitaanka, gudaha dalka iyo waddammada Codsi baasaboor caafimaad oo oggolaanaya in tallaalka, xasaanadda iyo macluumaadka kale ee caafimaadka lala wadaago masuuliyiinta dalka iyo shirkadaha duulimaadyada inta lagu jiro safarada.
Sida loo isticmaalo HealthPass? Waxaad ku wareejin kartaa macluumaadkaaga tallaalka, baaritaanka iyo xasaanadda codsiga HealthPass adiga oo adeegsanaya arjiga e-Nabız oo aad ugu beddeli kartaa shahaadooyin, oo aad ku hayn kartaa taleefannadaada shahaadooyinka aad soo saartay.
HealthPass waxay u hoggaansantaa heerka Shahaadada Cagaaran ee Dijital ah oo ay daabacday Midowga Yurub.
Cabirka Faylka: 12.00 MB
Horumar: T.C. Sağlık Bakanlığı
Codsiga moobilka ee HealthPass waa arjiga baasaboorka caafimaadka oo ay Wasaaradda Caafimaadka u...